Statement from the Humanitarian Coordinator for Somalia, Philippe Lazzarini: "Race against time to help drought and conflict stricken communities in Somalia" [EN/SO] - Somalia | ReliefWeb
Download document (PDF | 162.64 KB | English version)
Download document (PDF | 34.79 KB | Somali version)
“Tartanka lagula jiro waqtiga si loo caawiyo bulshooyinka abaarta iyo colaaddu ku dhibaateeyeen Soomaaliya”
(New York/Muqdisho, 10 Oktoobar 2014) Waxaa loo baahan yahay in degdeg kor loogu qaado hawlgalka bani’aadamnimada ee Soomaaliya. Waxaan tartan kula jirnaa waqtiga si aan nafo ugu badbaadinno degaannada ay abaarta iyo colaaddu dhibaateeyeen.
Aad ayaan ugu welwelsanahay dhibaatada bani’aadamnimo ee ka soo fool leh koonfurta, bartamaha iyo waqooyiga-bari ee Soomaaliya. Gobollada Bakool, Baay, Gedo, Hiiraan iyo Galgaduud ayaa ah kuwa ay dhibaatada ugu weyn soo gaartey. Qoysaska bulshooyinkan ayaa si weyn ugu baahan biyo, cunto iyo daryeel caafimaad.
Hay’adaha bani’aadamnimada ayaa kor u qaadey waxqabadyadooda si ay uga jawaabaan digniinaha hore ee soo baxaya. Haseyeeshee waa in aan qabanaa wax intaa aad uga badan. In la helo waddooyin la mariyo gaargaarka ayaa muhiim u ah si dadka tabaaleeysan loola gaadho gargaar ku filan.
In kasta oo ay dunida maanta ka jiraan dhibaatooyin badan, haddana ma aha mid la qaadan karo in aan wax laga qaban xaaladda bani’aadamnimo ee Soomaaliya. Waxaa maanta aad loogu baahan yahay maaliyad lagu ballaariyo hawlgallada. Maaliyadda la siinayo adeegyada haqab-beelka cuntada, nafaqada, caafimaadka, biyaha, fayadhowrka iyo nadaafadda ayaa loo baahan yahay in degdeg loo kordhiyo.
Shaqaalaha gargaarka ayaa horey u muujiyey in in kasta oo ay jiraan culeysyo iyo nabadgelyo-xumo joogto ah haddana in ay awoodaan in ay gaaraan dad kale oo badan oo gargaar u baahan iyaga oo adeegsanaya habab kala duwan, haddii ay helaan dhaqaale ku filan waqtigii loo baahnyay. Waxaan sii wanaajineynaa nidaamyada lagu hubinayo in aan la lunsan gargaarka si hawsha loogu qabto si ka waxtar badan sida hadda.